हृदय येशूको विचार गर्नुपर्छ | Apg29
विश्व मसीहीहरूले जसको हृदय जल छन् र ऐना येश&#
म घर हुँदा म ऐनामा आफैलाई हेर्न र भन्छन्, "म तपाईंलाई पहिले देखेका छैन?"। तपाईंलाई थाहा कुनै अद्भुत दृष्टि, त्यसपछि त्यहाँ थियो, म जस्तै बिरामी भर्नुहोस्। आज दर्पण छवि, एउटै छैन अब तपाईं पनि आफ्नो कमीकमजोरी र गल्तीलाई संग येशू ख्रीष्ट आबद्ध गर्न र आफ्ना छोराछोरीलाई हुन, आनन्दित महसुस हुन्छ।
तपाईं सप्ताह को ऐनामा आफूलाई देख्नुभएको छ?
साझेदारी मसीही प्रकृति छ। प्रेम गर्ने उहाँले छ के दिन चाहनुहुन्छ। तपाईं सप्ताह को ऐनामा आफूलाई देखेको छ भने म तपाईंलाई सोध्न थियो? सायद तपाईं ओ ओ सोच थियो त पुरानो म बन्न, NAMEN धेरै झुर्रियाँ म किनभने एन्डी गरेको मेल प्राप्त गरेको छ, वा तपाईं पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ, ओ ओ म हरेक दिन prettier प्राप्त परमेश्वरले मलाई प्रेम गर्नुहुन्छ!
हाम्रो विचार रोचक सही छ? लगभग 15 वर्ष पहिले लागि म रक्सी को एक पलटा र पिउने धेरै थियो र चार गार्ड र सोधे जसले तपाईंलाई कस्तो दुई पुलिस को nerbrottad भयो? राम्रो जसले शरीर मा प्रति हजार बाहिर काम लगभग4डाक्टर अनुसार, थियो जो एन्डी संग यति राम्रो थिएन, छ, घातक रक्सी विषाक्तता को जोखिम, यो क्रिसमस सबै!
म जो inebriated थियो मोर्गन, मेरो साथी, मा धेरै rödbetsallad र छम खाएका थिए। हामी पक्षलाई ठाउँमा गएका थिए र त्यहाँ म अचानक सबै म चार गार्ड र दुई प्रहरी अधिकारीहरू भुइँमा मलाई तल wrestled गर्ने छ, बाहिर blacked र म गरेको कुरा सम्झना छैन।
शरीर मा धेरै रक्सी संग त तिनीहरूले मलाई म दुर्भाग्य सकरखण्ड सलाद तल spyde जो सेल भर्न पठाए। तिनीहरूले मेरो घाँटी वरिपरि मलाई घर, nerspydd र बेल्ट पठाउन जब म त लज्जित थियो, र मोजा बिना, म प्रहरी चौकी छोड्नुहोस्। यसलाई कम से कम 20 डिग्री थियो।
म घर हुँदा म ऐनामा आफैलाई हेर्न र भन्छन्, "म तपाईंलाई पहिले देखेका छैन?"। तपाईंलाई थाहा कुनै अद्भुत दृष्टि, त्यसपछि त्यहाँ थियो, म जस्तै बिरामी भर्नुहोस्।
आज दर्पण छवि, एउटै छैन अब तपाईं पनि आफ्नो कमीकमजोरी र गल्तीलाई संग येशू ख्रीष्ट आबद्ध गर्न र आफ्ना छोराछोरीलाई हुन, आनन्दित महसुस हुन्छ।
येशूको दर्पण छवि छ कि हृदय जल
हामी पूरा मानिसहरूलाई परमेश्वरको प्रेमको थप आवश्यक! हामी धेरै शब्दहरू कसरी लाग्छ, तर हामी हाम्रो छिमेकीलाई प्रेम छ? विश्व फिक्री बन्द जनाए र यसलाई हामी अब देख्न के भन्दा पनि खराब हुनेछ। विश्व मसीहीहरूले जसको हृदय जल छन् र ऐना येशू ख्रीष्ट दर्शाउने आवश्यक छ।
अब म ऐनामा आफैलाई हेर्न सक्नुहुन्छ
को दर्पण छवि, म त्यसपछि त खराब महसुस, मोर्गन मेरो तथाकथित भरण राउन्ड सुखद थिएन पछि हेर्न थियो। अब म ऐनामा आफैलाई देख्न सक्नुहुन्छ र त्यहाँ म एक सुन्दर रिडिम 51 वर्ष पुरानो मानिस सुरक्षित हेर्नुहोस्। हो, म सबै अरूलाई मन छु, यो सबै मेरो मेल पत्ता सुनिनु छ? तर जो यो तपाईं र म त येशू ख्रीष्टले प्रेम गर्नुभयो।